Laser Holographic အတုဆေးဝါးအတုပုံတူကဒ်, လေဆာပုံတူပလပ်စတစ်ကဒ်, လေဆာ Holographic ပုံတူအတုအတုကဒ်
 » RFID Card ကို » လုံခြုံရေး ID ကဒ်
လုံခြုံရေး ID ကဒ် Laser Anti-counterfeit Pattern Portrait Printing Card, Laser Anti-counterfeit Pattern Portrait Printing Plastic Card, Laser Holographic အတုဆေးဝါးအတုပုံတူကဒ်, Laser Holographic Anti-counterfeit Pattern Portrait Printing Card, Laser Holographic Anti-counterfeit Pattern Portrait Printing Plastic Card, လေဆာ Holographic ပုံတူအတုအတုကဒ်, Laser Holographic Portrait Anti-counterfeit Plastic Card, Laser Holographic Portrait Plastic Card, Laser Holographic PVC Portrait Card, Laser Portrait Anti-counterfeit Card, Laser Portrait Anti-counterfeit Plastic Card, လေဆာပုံတူပလပ်စတစ်ကဒ်, Laser PVC Portrait Card
ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုများ: အရွယ်အစားနှင့်သတ်မှတ်ချက်, အထူ, Holographic Anti-counterfeiting pattern, variable data printing, IC ချစ်ပ်ထုပ်ပိုး, with magnetic stripe.
အထုပ် RF ချစ်ပ်: EM4102, TK4100, EM4200, M1 S50, FM11F08, ဂြိုလ်သား h3, SLE4442, စသည်တို့ကို.
RF အကြိမ်ရေ: LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF
Holographic တံဆိပ်ပစ္စည်း: ပေ
ကဒ်အရွယ်အစား: 85.5×54×0.80mm or customized
Anti-counterfeit portrait cards are plastic cards that are extremely difficult to copy, and can hardly be said to be copied. Anti-counterfeit portrait cards are generally used for ID cards, bank cards, credit cards, ဝန်ထမ်းကတ်များ, စသည်တို့ကို, but there are many other places in addition to these The anti-counterfeiting card mainly depends on whether the card needs to be made anti-counterfeiting. The anti-counterfeit card not only can playagood role in anti-copying, but also can be customized with various shapes of anti-counterfeiting icons, such as LOGO, စာသားမ, various graphics, and other processes except anti-counterfeiting are the same as making ordinary plastic cards.
အခြားသူများက: IC chip data initialization/Encryption, Variable Data, programed ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်အစင်း, လက်မှတ panel က, ဘားကုဒ်, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, ဖောင်းကြွ, DOD ကုဒ်, NBS ခုံးကုဒ်, Die-cut.
I am interested in your product Laser Holographic Anti-counterfeit Pattern Portrait Card, လေဆာပုံတူပလပ်စတစ်ကဒ်, လေဆာ Holographic ပုံတူအတုအတုကဒ်
prev: လေဆာ Holographic Anti-အတုရုပ်ရှင်ပွဲတော် PVC Card ကို, လေဆာဆန့်ကျင်အတုပလတ်စတစ်ကဒ်
လေဆာ Holographic Anti-အတုရုပ်ရှင်ပွဲတော် PVC Card ကို, လေဆာဆန့်ကျင်အတုပလတ်စတစ်ကဒ်
ကတ်ဟာ Off ခြစ်ရာ, အောနေတယ် Card ကို, Scratch လက်မှတ်, Password ကို Coating ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Card ကို
RFID O.V.I.Print Effect Card ကို, optical Variable မှင် Anti-အတု Card ကို Print
RFID လေဆာကတ်, လေဆာ Effect Anti-အတု Card ကို
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (85)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (27)
module / အင်တင်နာ (25)
အခြားအ IoT ထုတ်ကုန်များ (10)